गर्भनिरोधक चक्की खाने तालिका छुटेमा के हुन्छ ! सेवन गर्दा कति प्रभावकारी छ त ! यो चक्की • Nepal's Trusted Digital Newspaperगर्भनिरोधक चक्की खाने तालिका छुटेमा के हुन्छ ! सेवन गर्दा कति प्रभावकारी छ त ! यो चक्की • Nepal's Trusted Digital Newspaper
गर्भनिरोधक चक्की खाने तालिका छुटेमा के हुन्छ ! सेवन गर्दा कति प्रभावकारी छ त ! यो चक्की
काठमाडौँ, ३१ साउन । अनिच्छित गर्भ रोक्नका लागि महिलाले गर्भनिरोधक गोली अर्थात बर्थ कन्ट्रोल्स पिल्स सेवन गर्छन् । यदि कुनै दिन उक्त चक्की सेवन गर्न भुलियो भने के यसले तपाईं गर्भवती हुने सम्भावना बढ्छ ?
यदि तपाईंले मिड प्याकलाई बिचमा छाडिदिनुभयो भने वा चक्की सेवन गर्न भुल्नुभयो भने यसले महिनावरी चक्र पनि बिग्रन्छ जुन सामान्य हुनमा निकै समय लाग्छ । किनभने यसले ओभ्युलेसन चक्रलाई कन्ट्रोल र प्रोटेक्ट गर्छ । यसैले चक्की लिइएन भने ओभ्युलेसनमा असर पर्छ, जसले अन्डा ओभरीजबाट बाहिर निक्लन सक्छ । साथै यसबाट हल्का रक्तश्राव पनि हुनसक्छ । हरेक दिन चक्की सेवन गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म एउटै समयमा लिने गर्नुहोस् । यसले गर्दा हर्मोन सन्तुलनमा रहन्छ । धेरै भन्दा धेरै एक वा दुई घण्टाको तल माथि चक्की लिने समय फेरबदल हुनसक्छ । यद्यपि यो समय पनि धेरै घटबढ भएमा गर्भवती हुने संभावना बढब्छ ।